Ngaba zezona ntlanzi zinkulu zamanzi ehlabathini | Ngeentlanzi
Ngaphandle kwamathandabuzo, izilwanyana ezihlala kulo mhlaba wethu zinomdla wokwenene. Zininzi iintlobo ezifuna ingqalelo ekhethekileyo. Inxalenye yazo ifumaneka kwindalo ephila emanzini eyenza ulwandle, iilwandle, amachibi, imilambo. Kule yokugqibela, ezo zidityaniswe namanzi acocekileyo, ezininzi zazo eyona ntlanzi inkulu ikhoyo.
Kwaye nangona siqhele ukubona iintlanzi zamanzi amancinci ezinobungakanani obuncinci kule mihla yethu, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba zininzi iintlobo zezi zilwanyana zinobuhlobo ezingaphezulu kobukhulu obukhulu.
Kweli nqaku siza kufumanisa ukuba ngoobani ezi ntlanzi zibambe imbeko ibe yeyona ntlanzi inkulu engenamanzi ehlabathini, kunye neempawu zabo, iindawo abahlala kuzo kunye nokunye okuninzi.
4 I-stingray enkulu
ILa Piraiba, okanye ikwabizwa ngokuba yiGiant Catfish, Uhlala emanzini ashushu kumbindi nakumantla oMzantsi Merika, ngakumbi ngakumbi emanzini ahlamba izitya zeAmazon, iOrinoco kunye neGuayanas imilambo.
Ngaphakathi kwePiraibas, sineentlobo ezisixhenxe. Ngokuqinisekileyo, zininzi kakhulu, iintlanzi ezinkulu. Kuqikelelwa ukuba banokufikelela kwi zizonke iimitha ezi-3,5 ubude kunye nobunzima kufutshane neekhilogram ezingama-200.
Zizilwanyana ezikhohlakeleyo, kuba zitya ezinye iintlanzi, iinyoka, kunye neenkawu, iintaka, njl.njl.Zizithathela umbulelo kumlomo wazo omangalisayo ongama-40 cm. Enye into eyahlukileyo kukuba bayakwazi ukukhupha isandi esifana nengxolo.
Kwicandelo lokuloba, ezi ntlanzi zingaphezulu kwexabiso.
Indawo kolu luhlu kuhlala Sturgeon wasentsomini, isidalwa ukuba wonke umntu othanda iintlanzi nokuloba uya kuyifumana iqheleke ngakumbi.
Alithandabuzeki elokuba yintlanzi enomdla kuzo zonke iindlela. Kuqikelelwa ukuba bangaphezu kwezigidi ezingama-250 abakhe baphila kulo mhlaba, ke iyichasile inkqubo yokuzivelela kwezinto.
Kwiintlobo ezahlukeneyo zesturgeon Zifumaneka kwiinkqubo zemilambo emikhulu esemantla eikhweyitha. Ikwabolekisa ulwabiwo oluthile kwiiLwandle eziMnyama kunye neCaspian, nangona kunjalo kwezi ndawo zimbini ziphantsi kakhulu. Ezinye zigcinwe eSpain, ngakumbi kwimilambo ebaleka kakhulu njengeGuadalquivir.
Kwiimeko eziqhelekileyo, Ubungakanani be-sturgeon ziimitha ezi-3.5 ubude, kunye nobunzima beekhilogram ezingama-350. Kodwa, njengoko kuqhele ukwenzeka, kukho iimeko ezibalekayo kuwo nawuphi na umthetho ngokubanzi, kwaye kwii-sturgeons bezingayi kuba zincinci. Owona mzekelo mkhulu wakha wabonwa, wawumalunga neemitha ezi-6 ubude kwaye unobunzima nje obungaphezulu kweekhilogram ezingama-800, irhamncwa lokwenene!
IArapaima, edla ngokubizwa ngokuba yiPaiche okanye iPirarucú, yenye yezona ntlanzi zinkulu zasemlanjeni ezaziwayo, mhlawumbi kuphela emva kwentlanzi yaseBelgium
Inendawo ekhethekileyo yokufumana amanzi amatsha ashushu, yiyo loo nto imilambo iAmazon, iMadre de Dios kunye neBeni ingamakhaya ayo.. Ukongeza, ngokusebenza komntu, ikwahlala kwimimandla yomlambo waseThailand naseMalaysia.
Umzimba wakho woyisile Iimitha ezi-3 ubude, kwaye ubunzima bayo busondele kuma-250 eekhilogram. Njengomdla, kufuneka kuthiwe xa ihlala emanzini angenayo ioksijini eninzi, kufuneka inyuke iye kumaxesha athile ukuze itye ioksijini evela emoyeni. Oku kunokwenzeka kuba isinqandi sayo sokuqubha asinanto yakwenza neentlanzi ezininzi esele siqhele ukuzibona, kuba iziphatha ngohlobo oluthile njengomphunga womntu.
Itya ezinye iintlanzi kunye nezilwanyana ezincinci ezinokuthi ziwele emanzini emilambo, sithetha ngeentaka, izilwanyana ezirhubuluzayo, izilwanyana eziphila emanzini nasemanzini, izilwanyana ezincancisayo, njl. Ukwenza oku, isebenzisa umhlathi onamandla owenziwe yimigca yamazinyo eliqela.
Enye indlela ekwakubetha ngayo kwezi ntlanzi kukuba xa zizalela amaqanda, yenza iindlwane kwiindawo ezinesanti yomlambo, kwaye oko kunokulinganisa kancinci ngaphezulu kwesiqingatha semitha ububanzi kunye neesentimitha ezingama-20 ubunzulu.
Olu hlobo lweentlanzi lusongelwe ngumntu kuba kumaxesha adlulileyo bekukho ukuloba okukhulu ukufumana ulwimi. Ulwimi olunamathambo olunamandla amayeza okusetyenziselwa ukulwa usulelo lwamathumbu.
Namhlanje, iArapaimas iyaqhubeka nokubanjwa kwaye ikwazalelwa ekuthinjweni ukuze ithengise inyama yabo emnandi.
Ngokungafaniyo nento uninzi lwenu olunokucinga ngayo ekuqaleni, ii-stingray kunye nee-mantas ayizizo kuphela iintlanzi zaselwandle ezingqongqo, kodwa ziye zaqhelana nobomi emanzini amatsha. IGiant Manta Ray ngumzekelo ocacileyo woku ophawula kwaye, enyanisweni, yenye yezona ntlanzi zinkulu zomlambo ezikhoyo kuMhlaba wonke.
Umzantsi-mpuma weAsia, ngakumbi ngakumbi imilambo iChao, iPraya neMekong, iyeyona ndawo ayithandayo..
Ekuboneni kokuqala, inani lakhe liyamangalisa. Kufunyenwe abantu ukuya kuthi ga kwi-7 yeemitha ubude, inobunzima obungaphezu kwethoni. Ububanzi bezi zilwanyana bukwaphawuleka kakhulu, kuba into eqhelekileyo kukuba iphakathi kweemitha ezimbini malunga. Ezi mpawu zivumela ukuba ibe yeyona inkulu kuzo zonke iintlobo zemitha kunye nemitha ye-manta ekhoyo.
Ngokungafaniyo nezalamane zayo ezisondeleyo ezinokuhlala kumanzi acocekileyo okanye ngokuchaseneyo kumanzi oolwandle kunye neelwandlekazi, ayinikwanga ulunya olunetyhefu olunoloyiko oloyikiswa nangubani na onesibindi sokuwela umendo wakhe.
Ukutya kwabo akufani kakhulu. Banemikhwa yokutya okutyayo, kwaye iintlanzi ezinamathambo kunye nee-crustaceans zifunyenwe njengokutya abakuthandayo.
Ngelishwa, ukuloba okukhulu nokungcoliseka okungapheliyo okuchaphazeleka kwindalo yasemanzini kuye kwathetha ukuba abemi babo baphelile kwaye ngoku inani labo lisemgangathweni.
Ezi zimbalwa zeentlanzi ezinkulu nezinkulu ezihlala emanzini angenawo amanzi. Eli qela linokudityaniswa ngamagama anje Catfish, Giant Piranha, Catfish, njl njl..
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Eyona ntlanzi inkulu engenamanzi ehlabathini